SULTANBET561 SERGEN YALÇIN İKİ İSMİN BİLETİNİ KESTİ - RESTBET501.COM GİRİŞ
Beşiktaşသည်အလုပ်များသောနာရီများကိုတွေ့ကြုံနေရသည်။ ဆာဂျင်ယယ်လ်ဆင်သည်ကစားသမားများကိုသွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူကနှစ်ခုအမည်များ၏လက်မှတ်ဖြတ်တောက်ခဲ့သည်။
လက်မှတ်ဖြတ်ထားသောအခြားကစားသမားမှာအူမက်နေရာဖြစ်သည်။ ဆာဂျင်ယယ်လင်သည် Lens နှင့် Umut Nayırတို့အားအခွင့်အလမ်းများလုံလောက်စွာပေးနိုင်သော်လည်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမစွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုသို့ပြောကြားခဲ့သည်။
Cyle Larin, Vincent Aboubakar နှင့်GüvenYalçınတို့သည် Sergen Yalçın၏ထိပ်ဆုံး ၁၁ ယောက်တွင်ရှိသည်။
ထို့အပြင်ဆာဂျင်ယယ်လ်စင်သည်အသက် ၂၁ နှစ်ရှိဘော့ဆစ်ကက်ရှိ Alpay Çelebiကိုတွေ့လိုကြောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုသို့ပြောကြားခဲ့သည်။
RESTBET501 SERGEN YALÇIN İKİ İSMİN BİLETİNİ KESTİ SUPERBAHİS489 SERGEN YALÇIN İKİ İSMİN BİLETİNİ KESTİ SUPERBAHİS630 SERGEN YALÇIN İKİ İSMİN BİLETİNİ KESTİ SUPERTOTOBET0120 SERGEN YALÇIN İKİ İSMİN BİLETİNİ KESTİ SUPERBAHİS630 SERGEN YALÇIN İKİ İSMİN BİLETİNİ KESTİ BETPAS423 SERGEN YALÇIN İKİ İSMİN BİLETİNİ KESTİ RESTBET501 SERGEN YALÇIN İKİ İSMİN BİLETİNİ KESTİ BETPAS423 SERGEN YALÇIN İKİ İSMİN BİLETİNİ KESTİ RESTBET501 SERGEN YALÇIN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK? TFF AÇIKLADI SUPERTOTOBET0120 SERGEN YALÇIN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK? TFF AÇIKLADI
6 Comments on SULTANBET561 SERGEN YALÇIN İKİ İSMİN BİLETİNİ KESTİ
TUNCA December 1, 2020 at 9:10 am
TOYGUN December 1, 2020 at 11:30 am
HAYRİYE December 1, 2020 at 11:50 am
GÜLDEN December 4, 2020 at 7:20 pm
HANDAN December 8, 2020 at 7:40 pm
İZZET December 9, 2020 at 2:00 pm